ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) နယ်မြေအတွင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကျပ်သန်း ( ၁၂၂၂၂ . ၀၂၅ ) သုံးစွဲဆောင်ရွက်ရန် လျာထား | Ministry of Border Affairs
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဂျပန်-မြန်မာအသင်းတို့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် ဂျပန်-မြန်မာ အသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဂျပန်အထက်လွှတ်တော် အမတ်ဟောင်းအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ရှမ်းပြည်နယ်( မြောက်ပိုင်း) ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်
နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန နယ်စပ်ဒေသ တိုင်းရင်းသားများ၏ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) နယ်မြေအတွင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကျပ်သန်း ( ၁၂၂၂၂ . ၀၂၅ ) သုံးစွဲဆောင်ရွက်ရန် လျာထား
နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်း Nov 18 /0Comments
၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၁၇
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) နယ်မြေအတွင်း နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ရန်ပုံငွေကျပ် (၁၂၂၂၂.၀၂၅) သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေး ရုံးခွဲ (လားရှိုး) မှ သိရှိရပါသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) အတွင်းရှိ မြို့နယ် (၁၁) မြို့နယ်၌ နယ်စပ်ဒေသ လမ်း/တံတား များ‌ ဖောက်လုပ်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေကျပ် (၆၀၇၁.၄၁၁) သန်းဖြင့်၎င်း ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက် ခြင်း၊ ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကျပ် (၁၈၂.၉၀၁) သန်းဖြင့်၎င်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) နယ်မြေအတွင်းရှိ “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအတွင်း လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေကျပ် (၁၉၂၉.၄၆၉) သန်းဖြင့်၎င်း ဦးစီးဌာနတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ကျပ် (၁၀ . ၁၃၂) သန်းဖြင့်၎င်း ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအတွင်း လမ်း၊ တံတားလုပ်ငန်း များအတွက် ရန်ပုံငွေကျပ် (၂၀၁၁.၄၀၂) သန်းဖြင့်၎င်း ကျောင်းခြံစည်းရိုးတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် ကျပ် (၂၃.၈၅၄) သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသအတွင်းရှိ လမ်း၊ တံတား လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေကျပ် (၁၈၁၂.၅၁၅) သန်းဖြင့်၎င်း စိမ့်စမ်းရေသွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်များ တည်ဆောက်ရန်အတွက် ကျပ် (၁၈၀.၃၄၁) သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား ရှမ်း (မြောက်) ဒေသနှင့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကြီး (၃) ခုဖြစ်သော “ဝ”ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသနှင့် ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသများ ဟန်ချက်ညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး နိုင်ငံတော်မှ စီမံကိန်းများချမှတ်ကာ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီး ဌာနမှ သိရှိရပါသည်။
နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်း Jan 03
နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်း Jan 02
မိုင်းရယ်မြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ကျောက်ချောလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်
နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်း Dec 29
သိန္နီမြို့နယ်အတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် ကျောက်ချောလမ်းအပြီးသတ်ဆောင်ရွက်
နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်း Dec 19
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်
နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်း Dec 18
နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသတင်း Dec 07
Total Visitors: 860922